ထူးခြားချက်များ •	အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံးအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍ သန့် စင်သည့် သောက်ရေသန့် အား တစ်နေ့ လျှင်ဂါလံ (၁၀၀)ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ •	ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော ရေ၏ဖိအားကို မြှင့်တင့်ရန်အတွက် စွမ်းအားမြှင့်ရေစုပ်စက် ထည့်သွင်းထားခြင်း။ •	အလုပ်လုပ်နေသော အနေအထားအတွက် LED Display ထည့်သွင်းထားခြင်း။ •	အညစ်အကြေး၊ ဖုန်မှုန့် များမှ ကာကွယ်စေသော ခေတ်မှီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်း။ •	အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ရန် စက်ဖြင့်စမ်းသပ်ထားခြင်း။ •	(၁)နှစ် အာမခံရှိခြင်း။ Water Purifiers Series QX သည် Reverse Osmosis နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီး သန့်စင်သည့် သောက်ရေသန့် များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများဖြင့် ရေသန့် စင်သော အဆင့်(၅)ဆင့်မှ (၇)ဆင့် အထိပါရှိပြီး ကလိုရင်း၊ သတ္တူဓာတ်များ၊ အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းများ၊ ဘတ်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များကို (၀.၀၀၀၁) မိုက်ခရွန်ထိ လျှော့ချပေးပြီး ၉၉.၉၉% အထက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ Model QX-RO •	ရေသန့် စင် အဆင့်(၅)ဆင့် ပါဝင်သော Reverse Osmosis နည်းပညာ •	Standard စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် သတ်တမ်းမှာ (၆)လအထက်ဖြစ်ပါသည်။ •	(၃)နှစ် မှ (၄)နှစ် သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane Model QX- RO+UV •	ရေသန့် စင်အဆင့် (၆)ဆင့် ပါဝင်သော Reverse Osmosis နည်းပညာ •	Standard စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် သတ်တမ်းမှာ (၆)လအထက်ဖြစ်ပါသည်။ •	(၃)နှစ်မှ (၄)နှစ်သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane •	နာရီ (၈၀၀၀) အထက်သတ်တမ်းရှိသော UV Kit 11W Model QX – RO+ Alkaline+ UV •	ရေသန့် စင်အဆင့် (၇)ဆင့် ပါဝင်သော Reverse Osmosis နည်းပညာ •	Standard စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် သတ်တမ်းမှာ (၆)လအထက်ဖြစ်ပါသည်။ •	(၃)နှစ်မှ (၄)နှစ်သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane •	(၁)နှစ်သတ်တမ်းရှိသော Alkaline Filter •	နာရီ (၈၀၀၀) အထက်သတ်တမ်းရှိသော UV Kit 11W Model QX-RO+ Mineral + UV •	ရေသန့် စင်အဆင့် (၇)ဆင့်ပါဝင်သော Reverse Osmosis နည်းပညာ •	Standard စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် သတ်တမ်းမှာ (၆)လအထက်ဖြစ်ပါသည်။ •	(၃)နှစ်မှ (၄)နှစ် သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane •	(၁)နှစ်သတ်တမ်းရှိသော Mineral စစ်ထုတ်ကိရိယာ •	နာရီ(၈၀၀၀) အထက်သတ်တမ်းရှိသော UV Kit 11W
ထူးခြားချက်များ •	အိမ်သုံး ရုံးသုံးအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍ သန့် စင်သည့်သောက်ရေသန့် အား တစ်နေ့ လျှင် ဂါလံ(၁၀၀)ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ •	ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော ရေ၏ဖိအားကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် စွမ်းအားမြှင့်ရေစုပ်စက် ထည့်သွင်းထားခြင်း။ •	RO Membrane သန့် စင်ခြင်းအတွက် အလိုအလျောက်ရေစစ်ချစေနိုင်သည် Value တပ်ဆင်ထားခြင်း။ •	ကြမ်းပြင်၌ ထားရှိနိုင်သော ကိုယ်ထည် ထည့်သွင်းထားခြင်း၊ နံရံအားအပေါက်ဖောက်ရန်မလိုခြင်း။ •	အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ရန် စက်ဖြင့် စမ်းသပ်ထားခြင်း။ •	(၁)နှစ် အာမခံရှိခြင်း။ Water Purifier Series S သည် Reverse Osmosis နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီး သန့် စင်သည့်သောက်ရေသန့်များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများဖြင့် ရေသန့် စင်သော အဆင့်(၅)ဆင့်မှ (၆)ဆင့်အထိပါရှိပြီး ကလိုရင်း၊ အိုင်းရွန်းများ၊ လေးလံသော သတ္တူဓာတ်များ၊ အဆိပ်သင့် ပစ္စည်းများ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို (၀.၀၀၀၁)မိုက်ခရွန်ထိ လျှော့ချပေးပြီး ၉၉% နှင့်အထက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ Model S1 (High Capacity) •	တစ်နေ့ လျှင် ဂါလံ(၁၀၀)ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ •	(၁)နှစ်အထက်သက်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ •	(၃)နှစ်မှ (၄)နှစ်သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane Model S2 ( Standard Capacity) •	တစ်နေ့ လျှင် ဂါလံ(၅၀)ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ •	Standard စစ်ထုတ်ကိရိယာနှင့် သတ်တမ်းများ (၆)လ အထက်ဖြစ်ပါသည်။ •	(၃)နှစ်မှ (၄)နှစ်သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane Alkaline Filter (Optional) •	စွမ်းအင်မြှင့်တင့်ပေးခြင်း၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်စေခြင်း။ •	အဆိပ်အတောက်ကင်းစေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းရှိ ဇိဝကမဖြစ်စဉ်ကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့် သင့်တင့်ညီမျှသော ချဉ်ဖန်နှုန်း (PH) အားထိန်းညှိပေးခြင်း။ •	(၁)နှစ်အထက် သတ်တမ်းရှိခြင်း။ UV Kit 11W (Optional) •	ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ၉၉.၉၉% နှင့်အထက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း။ •	နာရီပေါင်း (၈၀၀၀)နှင့်အထက် သတ်တမ်းရှိခြင်း။
ထူးခြားချက်များ •	စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဟိုတယ်များအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍ သန့် စင်သည့် သောက်ရေသန့် အားတစ်နေ့ လျှင် ဂါလံ (၆၀၀)ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ •	ရေဖိအားနည်းသော အခြေအနေအတွက် အကူရေစုပ်စက်ထည့်သွင်းထားခြင်း။ •	ရေစီးဆင်းမှုနည်းသော အခြေအနေအတွက် Solinoid အဆို့ ရှင် တပ်ဆင်ထားခြင်း။ •	RO Membrane သန့် စင်ခြင်းအတွက် Manual Flush Value တပ်ဆင်ထားခြင်း။ •	ကြမ်းပြင်၌ထားရှိနိုင်သော ကိုယ်ထည် ထည့်သွင်းထားခြင်း၊ နံရံအား အပေါက်ဖောက်ရန်မလိုခြင်း။ •	(၁)နှစ် အာမခံပါရှိခြင်း။ RO Water Purifier Series A သည် Reverse Osmosis နည်းပညာကိုအသုံးပြု၍ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီး သန့် စင်သည့် သောက်ရေသန့် များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများဖြင့် ရေသန့် စင်သော အဆင့်(၅)ဆင့်မှ (၆)ဆင့် အထိပါရှိပြီး၊ ကလိုရင်း ၊ အိုင်းရွန်းများ၊ လေးလံသော သတ္တူဓာတ်များ၊ အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းများ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို (၀.၀၀၀၁) မိုက်ခရွန်ထိ လျှော့ချပေးပြီး ၉၉% နှင့်အထက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ Model A 300 (The Standard Use) •	တစ်နေ့ လျှင် ဂါလံ(၃၀၀)ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ •	(၁)နှစ်အထက် သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ •	(၃)နှစ်မှ (၄)နှစ်သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane Model A600 (The More Capacity) •	တစ်နေ့ လျှင် ဂါလံ (၆၀၀) ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ •	(၁)နှစ်အထက် သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ •	(၃)နှစ်မှ (၄)နှစ်သတ်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane UV Kit 16W (Optional) •	ဘက်တီရီးယားများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ၉၉.၉၉% နှင့်အထက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း။ •	နာရီပေါင်း (၈၀၀၀)နှင့်အထက် သတ်တမ်းရှိခြင်း။
69000 ~ 69000 Kyats
URANUS ကုမ္ပဏီမှာတင်သွင်းဖြန့် ချီသော Neos ရေသန့် စက်သည် မည်သည့်ရေမျိုးမဆို သန့် စင်ပေးနိုင်သည့် အပြင်သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သောအမှုန်အမွှားနှင့်ပိုးမွှားများကိုပါ စစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။၄င်းရေသန့်စက်သည်အရောင်၊ အနံ့နှင့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုအဆိပ်အတောက်များကိုပါသန့် စင်ဖယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်လို အပ်သောသတ္တုဓါတ်များအပြည့်အဝရရှိစေရန်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ Powerfully Magnetizationစနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် သံလိုက်စက်ကွင်းကိုဖြတ်ပြီးစီးဆင်းလာသောရေ သည် နှလုံးနှင့် ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးကို စွမ်းအင်ပြည့်ဝစွာကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါ သည်။လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Neos ရေသန့် စက်ကိုမှာယူလိုပါက URANUS ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
1.Italian technology 2.original product line. 3.European style 4.competetivie price gas hot water CE certificate, Export to Iran,Turkey,Russia,North europe,Poland and etc Robello gas boiler. 5-Provide both heating and shower water 6-High efficiency 7-Be used Neutral gas ,LPG,LNG.
1. UL 499 standard, ETL approved, NSF standard. 2. LED digital temperature display, toch screen for operation 3.Temperature display convert between Degree oF and Degree oC 4.High gloass transparent ABS with IMD technology 5. Patent heating technology, much longer service.
1. Using plus QST silicon tube non-metallic heating technology, the world&#039;s leading, 100% water and electricity separation, never furring. 2. New sixth generation IST6 Seten original type intelligent double CPU dual-core frequency conversion constant temperature control system, constant temperature faster and more accurate; 3. The Bullet temperature sensor, temperature measurement more accurate; 4. Microcomputer intelligent control system, and leakage resistance, prevent over temperature, high pressure, prevent dry, breakdown self check ,more than ten programmed security intelligence protection system, more secured; 5.Self-developed rear type hall flow sensor, automatic detection of water pressure, water temperature, water flow, ensure that never dry; 6. Use high-grade high strength color crystal toughened glass panel, noble, fashion; 7. automatic shutdown in 30 minutes without operation , prevent repeated heating, energy saving 8. Power off memory function no need the second set, convenient and quick; 9. Circuit hidden installation, can be multiple water supply; 10.Standard configuration: luxury lifter frame, common detachable shower head, pressure temperature control valve .